1962 : Taona nahaterahan'i Fredy JAOFERA
1968, 1969, 1970 : Taona nanitikitika ny sain'i Fredy JAOFERA nandraisana ny penina hanoratana tononkalo saingy amin'ny maha-zaza azy tamin'izany dia mbola ny kilalao sy ny lalao no nibahana ny eritreriny sy ny fiainany. Efa nifandimby tao an-dohany ny milalao sy ny manoratra...
1971, 1972, 1973 : Nanomboka nanoratsoratra i Fredy JAOFERA saingy mbola tsy tsara, mbola tsy matotra, mbola tsy masaka ny asasorany fa zaza no nanoratra. Mbola tsy hainy sy voafehiny ny fomba fanoratana fa ny teny frantsay no tenin'ny fahazazany.
15 Novambra 1974 : Daty nanoratan'i Fredy JAOFERA ny tononkalony voalohany mitondra ny lohateny hoe : "SAMBATRA IANAREO" tao amin'ny Parc et Ateliers des Travaux Publics (PATP) tao Alarobia Amboniloha.
1980 - 1983 : Mpianatra tao amin'ny Insitution Sainte Famille Mahamasina i Fredy JAOFERA ka rehefa tonga ny fetin'ny sekoly dia nandray anjara mavitrika izy tamin'ny fiantsana tononkalo.
31 Marsa 1984 : Nivoaka tao amin'ny Gazety MATIN ny tononkalony nampitondrainy ny lohateny hoe : " RY DADA "
26 Mey 1984 : Nivoaka tao amin'ny Gazety ATRIKA ny tononkalony hoe : " SAMBATRA IANAREO "
03 Desambra 1984 : Antsa tononkalo nataon'ireo nanompo firenena tao Antsirabe tao amin'ny Farimbona, trano fanaovam-pety eo afovoan-tanana niandrakaitin'ny poety Fredy JAOFERA sy RANARIVOLA Andriambalo ( Andry) ary ny namana rehetra nanompo firenena. Tsy nisy ny vidim-pidirana fa rakitra no notatazana. Feno hipoka ny trano fanaovam-pety.
25 Janoary 1985 : Nivoaka tao amin'ny Gazety MIDI ny tononkalony hoe : " TENY ROA".
24 Febroary 1991 : Tafiditra tao amin'ny Faribolana SANDRATRA i Fredy JAOFERA
Jolay 1991 : Analakely - Manjakandriana - Moramanga - Toamasina
24 Avrily 1992 : Fihaonana tamin'ny poety Jacques RABEMANANJARA tany amin'ny Oniversite Antananarivo tao amin'ny GRAND AMPHITHEATRE de l'E.E.S.D.E.G.S.
25 Septambra 1992 : Tafiditra tao amin'ny Union des Poètes et Ecrivains Malagasy na ny HAVATSA i Fredy JAOFERA.
18 Novambra 1992 : Antsa tononkalo niarahan'i Fredy JAOFERA tamin'ireo mpanoratra namany ao amin'ny Faribolana SANDRATRA tao amin'ny Cercle Germano-Malagasy. Nalaina televizionina, ry zareo ary hita soa aman-tsara tamin'ny fahita lavitra ny hariva.
26 Marsa 1993 : Fandaharana SALANITRA notontosain'i Louis Bernard RAKOTOMANGA tao amin'ny televizionina malagasy tamin'ny fito ora hariva ka nanasany ny poety Jeannot RATSIMBAZAFY sy Fredy JAOFERA.
10 Desambra 1993 : Niaraka tamin'ireo mpianatry ny Sekoly AMBOHIJATOVO AVARATRA ny poety RHA Nary, ARIKAOMISA ary Fredy JAOFERA notarihan-dRamatoa Esther RANDRIAMAMONJY, Mpampianatra sy Akademisianina malagasy. Nanao famelabelarana mikasika ny tononkalo izy ireo tamin'izany no niantsa tononkalo ihany koa.
1994 : Nivoaka ny bokin'ny HAVATSA hoe : " VELONA HO VELONA NY TENY SY NY HAISORATRA MALAGASY ". Ahitana ny tononkalon'i Fredy JAOFERA io boky io.
02 Febroary 1994 : Nivoaka tao amin'ny Gazety MIDI ny tononkalo hoe : " AMIKO NY RENY ".
12 Aogositra 1994 : Fotoam-pankalazana an'i Fredy RAJAOFERA ka nahitana an'i Fredy JAOFERA tao amin'ny fahita lavitra niantsa ny tononkalon'ny raibeny hoe : " LAVITRY NY MASO VAO MAINKA AKAIKY NY FO "
14 Septambra 1994 : Nambaran'ny Gazety MIDI ny fivoahan'ny bokin'i Fredy JAOFERA hoe : " NY HAFATRO ".
Oktobra 1994 : Navoakan'ny revio MPANOLOTSAINA ny kabary sy tononkalo nataon'ny poety tanora toy an-dry Ediama, Nary, Arikaomisa ary Fredy JAOFERA tamin'ny fitetezana sekoly sy Fiangonana izay notarihan-dRamatoa Esther RANDRIAMAMONJY : Lycée ANDOHALO / Complexe Scolaire AMPEFILOHA / Kolejy Teolojika IVATO / Fiangonana FJKM AMBOHIPO / Fiangonana FJKM ISOTRY FITIAVANA / Faculté de Théologie AMBATONAKANGA-Fiangonana.
1995 : Nivoaka ny bokin'ny HAVATSA hoe : " NY RENIKO, NY TENIKO ". Ahitana ny tononkalon'i Fredy JAOFERA io boky io.
Mey 1995 : Hita ao amin'ny Gazety ara-pilazantsara NY SAKAIZAN'NY TANORA ny lahatsoratra iray manambara fa i Fredy JAOFERA no hany tamingana manohy ny zava-bitan'i Fredy RAJAOFERA.
Jona 1995 : Nivoaka tao amin'ny Gazety NY MPAMANGY ny tononkalo hoe : " MALAGASY VE IANAO ? "
1998 : Fanovana ny Biraon'ny HAVATSA : tonga Mpitantsoratra Voalohany i Fredy JAOFERA
22 Janoary 2000 : Nivoaka tao amn'ny GAZETIKO ny tononkalo hoe : " VAVAKA MANGINA "
12 Novambra 2004 : Fihaonana voalohany sy Fivoriana voalohany tao amin'ny tokantranon'i Fredy JAOFERA ( 8, rue des Goncourt - 75011 PARIS ) tamin'izay hananganana ny Havatsa-Upem sampana Frantsa.
29 Janoary 2005 : Tonga Filoha Lefitry ny " Union des Poètes et Ecrivains Malagasy section Frantce " na ny HAVATSA sampana Frantsa i Fredy JAOFERA.
04 Febroary 2005 : Naka feo an'i Fredy JAOFERA ny Radio Echos du Capricorne (Paris) tamin'ny alatsinainy 31 Janoary 2005 tamin'ny telo ora tolakandro. Ramatoa Claudia Solofolandy, mpanao fandaharana ao amin'ny Zooma Capricorne no niresadresaka taminy mikasika ny asasorany, ny mombamomba azy ary ny fikambanana. Re tao amin'ny Zooma Capricorne izany ny Zoma 04 Febroary 2005 tamin'ny enina ora maraina.
Alahady 06 Febroary 2005 : Tononkalon'i Fredy JAOFERA no novakina tao amin'ny Radio FEON'IMERINA (Antananarivo) tamin'ny valo ora alina.
30 Avrily 2005 : Lanonana ofisialy tamin'ny fananganana ny Havatsa-Upem sampana Frantsa tao amin'ny REPERMAD (40, rue du Général FOY - 75008 PARIS ) ny maraina sy ANTSA TONONKALO tao amin'ny FIAP ( 30, rue Cabanis - 75014 PARIS) ny hariva.
05 Marsa 2006 : ANTSA TONONKALO nahatsiarovana an'i Jacques RABEMANANJARA nandraisan'ny Havatsa-Upem anjara tao Cachan. Ireto no nisolo tena ny Fikambanana : FX Mahah, Fredy JAOFERA, Hanitr'Ony, Andamioly ary Bana RAHALAHY. Nanome voninahitra ny lanonana Ramatoa RANJEVA Yvette Rabetafika ( Printemps des Poètes)
06 Marsa 2006 : Adihevitra sy Antsa tononkalo momba ny " POESIE DE LA NEGRITUDE " tao amin'ny Théâtre Lucernaire ( 53, rue Notre Dame des Champs) ka nandraisan'i Fredy JAOFERA anjara. Ireto no poety niaraka taminy tamin'izany : Henri Kala Lobe, Lima Fabien, Francine RANAIVO ary Thierry SINDA (Printemps des Poètes).
05 Avrily 2006 : Nanatrika ny hoe : " LES ECRIVAINS FRANCOPHONES A L'HONNEUR " i Fredy JAOFERA tao amin'ny Mairie 11è ka tafahaona sy nidinidinika tamin'ireo mpanoratra ireto : Hélé Béji ( Tunisie) / M'Barek Ould Barouk ( Mauritanie) / Lambert Schlechter ( Luxembourg ) / Bernard Lefort ( France) / Maria Maïlat ( Hongrie-Roumanie )
23 Septambra 2006 : Fankalazana an'i Dox tao amin'ny FIAP izay nokarakarain'ny fianakaviany. Nandray anjara ny Hvatsa-Upem sampana Frantsa ary isan'ny mpiantsa tamin'io fotoana io i Fredy JAOFERA.
04 Novambra 2006 : Voka-dehiben'ny Fiangonana FPMA Port-Royal Arago tao amin'ny 13, Place Etienne Pernet (Métro Félix Faure). Fiaraha-misakafo, hirahira, dihy ary tononkalo no fotoana tamin'izany. Nandray anjara tamin'ny tononkalo i Fredy JAOFERA.
05 Novambra 2006 : Folo taona no nahamay ny rovan'ny Manjakamiadana. Nisy lanonana tamin'ny fandefasana horonantsary ho fahatsiarovana tao amin'ny FIAP. Ny Filoha lefitra Fredy JAOFERA no nikabary tamin'ny anaran'ny HAVATSA.
27 Janoary 2007 : Tonga Mpitoriteny Nasionaly amin'ny FPMA i Fredy JAOFERA
Febroary 2007 : Hita ao amin'ny TRAIT D'UNION, gazetin'ny R.N.S, ao amin'ny pejy 7 ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : "FONY".
24 Marsa 2007 : FAHATSIAROVANA an'ireto poety fito lahy ireto tao amin'ny FIAP : RADO / Samuel RATANY / DOX / Randja ZANAMIHOATRA / Jean Joseph RABEARIVELO / Fredy RAJAOFERA / Ny Avana RAMANANTOANINA nokarakarain'ny " Village ANDAMIOLY" ary niarahany tamin'ny Havatsa-Upem sampana Frantsa. Frefy JAOFERA no niantsa ny tononkalon'ny raibeny Fredy RAJAOFERA hoe : " KALON'NY NTAOLO " sy " HAITRAITRA SA AN-KASO".
Avrily 2007 : Nikabary tamin'ny lanonam-panokafana ny fotoana tany amin'ny R.N.S. (Vichy) ny Filoha lefitry ny Havatsa : Fredy JAOFERA.
14 Avrily 2007 : HETSIKA RADO tao amin'ny FIAP nandraisan'ny artista malagasy maro anjara ka nahitana ihany koa ny HAVATSA. Ny tononkalon'i RADO hoe : " MITSIKIA " no nataon'i Fredy JAOFERA.
30 Mey 2007 : Nivoaka ny boky hoe : TENY ROA
26 Jona 2007 : Nivoaka ny boky hoe : NOSY MAMIKO
02 Jolay 2007 : Nivoaka ny boky hoe : NY RANOMASOKO
06 Jolay 2007 : Antsa JJ RABEARIVELO tao amin'ny FIAP nokarakarain'ny Havatsa-Upem sy ny fikambanana hafa. MISY ERITRERITRA no tononkalon-dRABEARIVELO nandraisan'i Fredy JAOFERA anjara tamin'izany.
6 Septambra 2007 : Nivoaka ny boky hoe : FIAINANA
14 Desambra 2007 : ANTSA JJ RABEARIVELO tamin'ny teny frantsay nokarakarain'ny Havatsa-Upem tany Rueil Malmaison. RICKY no mpanakanto sy vahiny nasaina. Ny tononkalon-dRABEARIVELO hoe " FILAO " no nantsain'i Fredy JAOFERA tamin'io fotoana io.
Alarobia 20 Febroary 2008 : Vahinin'ny INALCO (10, rue Riquet) i Fredy JAOFERA ka nanao famelabelarana milasika ny haisoratra malagasy nanomboka tamin'i Fredy RAJAOFERA ka hatramin'i Fredy JAOFERA nahavoaka boky. Fahombiazana tanteraka ny fotoana. (Institut National des Langues et Civilisations Orientales).
Avrily / Mey 2007 : Ny revio MADA N°3 dia namoaka lahatsoratra amin'ny teny frantsay ao amin'ny pejy 18 sy pejy 19 mitondra ny lohateny hoe : " Fredy JAOFERA, POETE LYRIQUE PAR EXCELLENCE "
Novambra / Desambra 2007 : Ny revio MADA N°6 dia namoaka lahatsoratra milaza fa nivoaka ny bokin'i Fredy JAOFERA telo : TENY ROA / NOSY MAMIKO ary NY RANOMASOKO ao amin'ny pejy 20.
Febroary / Marsa 2008 : Ny revio MADA N°7 ao amin'ny pejy 33 dia mamoaka ny boky vaovaon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : FIAINANA.
22 Jolay 2008 : Vahinin'ny Radio RNM i Fredy JAOFERA tao amin'ny fandaharana KIDAONA MARAINA. Ny resadresaka re tamin'io fotoana io dia mikasika ny teny malagasy aty am-pita, ny fikambanana misy azy ary ny talentany. Io fandaharana io dia notontosain'i Hery VALISOA.
27/28 Septambra 2008 : Nanatrika ny " 5è Festival International d'Art et de la Poésie " tany Molsheim i Fredy JAOFERA.
30 Avrily 2009 : Nahita masoandro ny POETAWEBS.COM niarahan'i Fredy JAOFERA sy Toetra RAJAONARIVONY natsangana.
21 Novambra 2009 : " MADAGASIKARA, NOSY KONTINANTA, MISOKATRA AMIN'IZAO TONTOLO IZAO" no kabarin'i Fredy JAOFERA, Filoha lefitry ny Havatsa, tany Massy.
17 Avrily 2010 : Tafajoro ny Fikambanan'ny Mpikabary eto Madagasikara sampana Frantsa. Andia TSIPELAMANGA no andiany voalohany ary isan'izany i Fredy JAOFERA.
08 Oktobra 2010 : Vahiny tamin'ilay " VERNISSAGE D'ARTISTES PEINTRES SOLIDAIRES A MADAGASCAR " izay nokarakarain'ny Association Bakoly i Fredy JAOFERA tao amin'ny Hotel Campanille ( 3, rue du Marais), Villers Saint Paul.
30 Avrily 2011 : Notafian-damba ny Andia TSIPELAMANGA
May / Jona 2011 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : " RY TANIKO ".
Talata 11 Oktobra 2011 : Hita tao amin'ny gazety THE TIMES OF MADAGASCAR, laharana 00111, pejy fahefatra ilay tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « ANDRIANIKO » .
Zoma 14 Oktobra 2011 : Hita tao amin'ny gazety THE TIMES OF MADAGASCAR, laharana 00113, pejy fahefatra, ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe : « FREDY JAOFERA, Poeta sy Mpikabary »
Alakamisy 01 Desambra 2011 : Nivoaka tao amin'ny gazety TSONGOTSONGO, laharana 00001, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « TENY ROA ».
Zoma 09 Desambra 2011 : Nivoaka tao amin'ny gazety TSONGOTSONGO, laharana 00008, pejy fahafito, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « ELANELAN-TANY ».
Alarobia 21 Desambra 2011 : Nivoaka tao amin'ny gazety TSONGOTSONGO, laharana 00017, pejy fahafito, ilay tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « HO AVY ILAY MESIA ».
Alarobia 28 Desambra 2011: Nivoaka tao amin'ny gazety TSONGOTSONGO, laharana 00023, pejy fahafito, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « ONDRY BOTRY ».
19 Febroary 2012 : Lany ho Filohan'ny Fiangonana FPMA Port-Royal Arago Andriamatoa RAKOTOMALALA Eric J.
Septambra 2012 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 8, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : "ANDRIAMANITRA".
02 0ktobra 2012 : ( Nanomboka tamin'io andro io mandrapahatongan'ny faran'ny volana Oktobra 2012)
Isaky ny talata hariva amin'ny valo ora dia nandrenesana ny mikasika an'i Fredy JAOFERA sy ny tononkalony tao amin'ny Radio Ainga Ambohimahasoa (102.6 Fm)
23 Oktobra 2012 : Hita tao amin'ny TVM nandritra ny filazam-baovao malagasy i Fredy JAOFERA. Nambarany tamin'izany fa ny anton-diany teto an-tanindrazana dia ny hanatrehany ny Fankalazana ny faha-60 taonan'ny HAVATSA.
24 Oktobra 2012 : Hita tao amin'ny TVM nandritra ny filazam-baovao frantsay i Fredy JAOFERA. Ny resany tamin'izany dia ny fitantarany ny Fananganana ny Havatsa sampana Frantsa.
28 Oktobra 2012 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 1, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : "FANANKINANA"
01 Novambra 2012 : Hita tao amin'ny TVM i Fredy JAOFERA nandritra ny Fandaharan'ny Ministeran'ny Vakoka sy ny Kolontsaina. Noresadresahiny tamin'izany ny mombamomba azy sy ireo boky efa navoakany.
18 Novambra 2012 : Vahinin'ny Radio DON BOSCO i Fredy JAOFERA tamin'ny valo ora alina. Notantarainy fohifohy tao ny mombamomba azy ary nandrenesana ihany koa ny asasorany vitsivitsy.
16 Desambra 2012 : Re tao amin'ny Radio ANTSIVA tamin'ny efatra ora tolakandro ireo tononkalon'i Fredy JAOFERA amin'ny teny frantsay ao amin'ny bokiny nampitondrainy ny lohateny hoe : « AUTOMNE ».
Janoary / Febroary 2013 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 2, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : " NY ASAM-PANOMPOANA ".
Marsa 2013 : Ny " Associaton des Poètes des Afriques et d'Ailleurs " izay ivondronan'ireo mpanoratra avy any Afrika sy Caraïbes miteny frantsay dia namoaka boky tononkalo amin'ny teny frantsay iray misy 623 pejy mitondra ny lohateny hoe : " L'ANTHOLOGIE DES POEMES D'AMOUR DES AFRIQUES ET D'AILLEURS ". Mpikambana amin'io Fikambanana io i Fredy JAOFERA ary ahitana tononkalony telo amin'ny teny frantsay ilay boky.
Marsa / Avrily 2013 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 1, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : " TOKANA ".
May / Jona 2013 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 6, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : " AVY AO "sy " TOLOHO ".
26 Septambra 2013 : Nahazo ny mari-boninahitra « Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture » avy amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Vakoka Andriamatoa RAKOTOMALALA Eric Fredy Jaofera.
Septambra / Oktobra 2013 : Nvoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : " AVY AO ".
31 Oktobra 2013 : Navoakan'ny NEWSMADA ny fahaterahan'ny boky ALFA SY OMEGA nosoratan'i RANOE sy Fredy JAOFERA.
Janoary / Febroary 2014 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 1, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : "ARAHABA "
Alarobia 12 Marsa 2014 : Nanao ANTSA TONONKALO tao amin'ny IKM Antsahavola i Fredy JAOFERA tamin'ny roa ora sy sasany tolakandro sy namaly fanontaniana avy amin'ny mpanatrika.
Zoma 14 Marsa 2014 : Notoloran'ny Ministry ny Kolontsaina sy ny Vakoka, Ramatoa Elia RAVELOMANANTSOA, ny mari-boninahitra « Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture » Andriamatoa RAKOTOMALALA Eric Fredy Jaofera tao amin'ny toeram-piasany ao amin'ny TRANOMBOKIM-PIRENENA tamin'ny iraika amby ny folo ora maraina. Nanotrona an'izany ny mpiasan'ny Ministera sy ireo akaiky an'i Fredy JAOFERA.
Marsa / Avrily 2014 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 1, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : "29 MARSA 1947"
Alarobia 11 Marsa 2015 : Nivoaka tao amin'ny gazety L'INTELLO, laharana faha-17, pejy fahavalo, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « MALAGASY ISIKA ».
Marsa / Aprily 2015 : Nivoaka tao amin'ny Gazety FOI ET LUMIERE, pejy 7, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA hoe : " TOLONA 1947 ".
Asabotsy 24 Avrily 2015 : Nivoaka tao amin'ny gazety L'INTELLO, laharana faha-24, pejy fahavalo, ny tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « LALIM-PAKA ».
Alakamisy 25 Jona 2015 : Nivoaka tao amin'ny gazety SOA ny tononkalon'i Fredy JAOFERA mitondra ny lohateny hoe : « MALAGASY VE IANAO ? »
Talata 20 Oktobra 2015 : Re tao amin'ny Radio ZARASOA BETAFO 104.3 mHz tamin'ny 17h40 ireo tononkalon'i Fredy JAOFERA dimy voalohany ao amin'ny bokiny TENY ROA.
Asabotsy 07 Novambra 2015 : Fetim-bokatry ny Fiangonana FPMA Port-Royal Arago tao amin'ny 124, rue de Bagnolet - 75020 PARIS. Tononkalo telo nandraisan'i Fredy JAOFERA anjara : " ANDRIAMANITRA " / " VAVAK'ILAY POETY " / " TENY ROA ".
Asabotsy 26 Desambra 2015 : Nivoaka tao amin'ny DREAMIN TV ny mombamomba an'i Fredy JAOFERA.
Alarobia 13 Avrily 2016 : Resadresaka nataon'i Fredy JAOFERA mikasika ny TENY MALAGASY, NY AINGAMPANAHY ary FIANTSANA TONONKALO tamin'ny Kilasy Fahatelo, Faharoa,Voalohany ary Famaranana tao amin'ny Sekoly P'TIT MICHOU tany Itaosy.
Zoma 21 Oktobra 2016 : Fihaonan'i Fredy JAOFERA tamin'ireo mpianatry ny kilasy Terminal " Littéraire " tao amin'ny Sekoly P'TIT MICHOU eny Itaosy. Ny Haisoratra sy ny mombamomba an'i Fredy JAOFERA no fampianarana tamin'izany.
Alatsinainy 24 Oktobra 2016 : Hita tao amin'ny Televizionina Malagasy ( TVM ) i Fredy JAOFERA nandritra ny filazam-baovao amin'ny teny malagasy. Nambara tamin'izany fa hanome voninahitra ny Herinandron'ny Havatsa no nahatongavana eto an-tanindrazana sy hitondra ny bokiny vaovao mitondra ny lohateny hoe : BEMIRAY hampirantiana sy hovarotana.
Talata 25 Oktobra 2016 : Nivoaka tao amin'ny gazety MIDI, laharana 10 088, pejy faha-16, ny sarin'i Fredy JAOFERA manatrika ny Herinandron'ny Havatsa.
Alarobia 26 Oktobra 2016 : Nivoaka tao amin'ny gazety MARIKODITRA, laharana 0131, pejy fahavalo, i Fredy JAOFERA nanatrika ny Fankalazana ny Herinandron'ny Havatsa. Nambarany fa zava-dehibe ny fanotronana an'izany.
Alarobia 26 Oktobra 2016 : Nivoaka tao amin'ny gazety BASY VAVA, laharana 7821, pejy fahavalo, fa nandalo teto an-tanindrazana i Fredy JAOFERA nanatrika ny Herinandron'ny Havatsa.
Zoma 04 Novambra 2016 : Nivoaka tao amin'ny NEWS MADA ao pejin'ny kolontsaina i Fredy JAOFERA. Lohateny tao ny nambarany hoe : " Ny ao an-trano no sekoly voalohany. "
Zoma 28 Oktobra 2016 : Nivoaka tao amin'ny gazety LA GAZETTE ao amin'ny pejy " Divers " ( Plusieurs nouveaux talents ) i Fredy JAOFERA